musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Yekutanga kesi yeCOVID-19 yakataurwa muTokyo Olympic Village
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Japan Kuputsa Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Iyo Mitambo, yakanzurwa gore rapfuura nekuda kwepasi rose COVID-19 denda, yakarongerwa kuitirwa pasina vaoni uye pasi pemitemo yakasimba yehutano pakati paJuly 23 naAugust 8.
Yekutanga chaiyo coronavirus kesi muOlympic Village yakashumwa panguva yekuongororwa bvunzo.
Pakutanga, mumiriri weNigeri ane makore makumi matanhatu akazove mushanyi wekutanga kumitambo akaiswa muchipatara neCOVID-60.
Vakuru vari kuyedza kutsvaga wekugurisa wemuUganda, uyo anga asiri-wekuratidzira bvunzo ye COVID-19 uye akashaya kubva muhotera yake.
The 2020 Mitambo yeOlympic vakuru vakazivisa kuti kesi yekutanga yeCOVID-19 yakamhan'arwa muOlympic Village muTokyo, Japan mazuva manomwe chete mutambo usati wavhura. Chiitiko ichi chakatarisirwa kutanga musi waChikunguru 23 uye chichaitwa pasina vateereri uye pasi pemitemo yakasimba yehutano.
"Ndiyo yaive yekutanga kesi muMusha iyo yakamhan'arwa panguva yekuyedza kuongorora," Masa Takaya, mutauriri wekomiti inoronga, akadaro nhasi.
Tokyo 2020 CEO Toshiro Muto akasimbisa kuti munhu akabatwa nechirwere uyu mutorwa anoita basa rekuronga mitambo iyi. Rudzi rwemunhu haruna kuziviswa, nekuda kwekunetseka zvakavanzika.
Vatapi venhau vekuJapan vakataurawo kuti mumiriri weNigerian ane makore makumi matanhatu akazove mushanyi wekutanga kumitambo akaiswa muchipatara neCOVID-60. Munhu akaongororwa hutachiona muairport neChina uye akagamuchirwa muchipatara.
Vakuru veJapan vari kuyedzawo kutsvaga wekusimudza uremu wekuUganda ane makore makumi maviri, Julius Ssekitoleko, aive asiri-show yekuyedzwa kweECVID-20 uye akashaya kubva muhotera yake muIzumisano, Osaka prefecture, nezuro. Anonzi akasiya tsamba achiti haadi kudzokera kuUganda.
Tokyo yakagadzirirwa kuramba iri pasi pechimbichimbi kwenguva yemutambo nekuda kwekukwira kwezvirwere. Guta guru reJapan rakazivisa zviitiko zvitsva zana nemakumi maviri nenomwe nezuro, rinova zuva rechitatu rakatwasuka iro kuwedzera kwezuva nezuva kwakapfuura chiuru.
Boka revaratidzira rakafamba kupfuura nzvimbo yeOlympic muTokyo neChishanu, vachida kuti Mitambo ikanzwe.
Ongororo dzichangoburwa dzenyika dzakaratidza kuti ruzhinji rweJapan rwaishuvira kuti mitambo irambidzwe kana kumiswa, ne78% yevakapindura vachiti vaipokana neMitambo ichiitika kunyangwe hosha yeCOVID-19 isiri kupera.